Coronavirus: Shan istiraatiijiyadood oo looga hortago Covid-19 - BBC News Somali
Image caption Coronavirus wuxuu ku dhacay in ka badan 350,000 oo qof caalamka oo dhan
Coronavirus wuxuu ku faafay caalamka oo dhan, wuxuu sababay walbahaar badan oo dunida ku fiday: kumannaan kiisas cusub iyo dad u dhintay ayaana maalin kastaa la soo weriyaa.
Magaalooyiin badan ayaa xiran, waxaana la hakiyay duullimaadyo, shirar caalami ahaa iyo dabaaldegyo.
Yurub ayaa hadda ah meesha ugu daran ee fayraska corona uu saameynta ba'an ku yeeshay - dhanka Latin Amerika, mareykanka iyo bariga Dhexe, tirada cusub ee ah dadka qaada xanuunka ayaa sii badaneysa.
Balse dalalka qaar waxay u muuqdaan in ay xakameeyeen in coronavirus uu faafo, kaas oo illaa iyo hadda caalamka ku dilay in ka badan 15,000 oo qof, kuna dhacay ugu yaraan 340,000.
Dhowr dal oo Asia ku yaalla, derisna la ah ama u dhow Shiinaha oo ah meesha uu ka bilowday cudurka ayaa hoggaaminaya qaabka looga adkaanayo covid-19.
"Waxaa jiro dalal maareeyay qaadidda tallaabooyiin lagu xakameeyo xanuunka, waana in aan caashir ka barano," ayuu yiri Tolbert Nyenswah oo ku taqasusay cudurada faafa, kana tirsan jaamacadda Johns Hopkins University ee Mareykanka.
"Kama hadlayo oo keli ah Shiinaha, halkaas oo tirada ay yaraatay ka dib markii la qaaday tallaabooyiin aad u adag marka loo eego dalalka dimuquraadiga ah oo si fudud aan u hirgelin karin arrintaas," ayuu sheegay.
"Dalalka qaarna waxay sameeyeen tallaabooyiin guuleystay, wax ku oolna ah."
Image caption Japan - oo cadaadis kala kulmeysa qabashada ciyaaraha olympic-kada - waxay maareysay xakameynta cudurka.
Tusaale ahaan, Taiwan oo Shiinaha deris laha oo shacabkiisa ay gaarayaan 23.6 milyan oo qof, waxaa laga soo sheegay 195 qof inuu ku dhacay fayraska corona, 2 qofna ay u dhinteen.
Dhanka Japan oo shacabka ku nool ay gaarayaan 120 milyan oo qof, waxaa laga soo sheegay 1,100 kiis. Sidoo kale illaa 9,000 oo qof ayuu ku dhacay dalka Kuuriyada Koonfureed, inkastoo tirada cusub iyo dadka u dhimanaya ay hoos u dheceen.
Waa kuwan tallaabooyiinka wax ku oolka ah:
1. Baar, baar oo baaritaan caafdimaad ku samee markale
Image caption Baaritaanka joogtada ah waa tallaabad ugu horeysa ee lagu xakameyn karo cudurkan.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO iyo khubaro ay BBC la hadashay, waxay isku waafaqeen in xilli hore la ogaado qofka qaba fayraska corona ay aasaas u tahay xakameynta faafidiisa.
"Ma ogaan kartid saameynta dhabta ah ee corona, haddii aadan garaneyn imisa qof buu ku dhacay," ayuu yiri Nyenswah.
Krys Johnson, oo ah barfasoor cudurada faafa ka dhiga jaamacadda Temple University ee Mareykanka ayaa arintaas sidoo kale aaminsan.
Wuxuu sheegay in tallaabadaas ay tahay midda isbedelka wayn u noqon karta fayraska: dalalka ku tiirsan baaritaanka joogtada ah, waxay arkeen natiijo ah in kiisaska cusub ay sii yaraanayaan, halka dalalka aan baarin qofkii laga shakiyo ay ku sii badanayaan dadka qaadaya fayraska.
"Kuuriyada koonfureed, waxay maalintii baareysay illaa 10,000 oo qof, taas oo micneheedu yahay in dad badan ay laba maalmood gudahood ku baarayeen, marka la barbardhigo Mareykanka dadka uu baaro bil gudaheed," ayuu u sheegay BBC.
Agaasimaha Guud ee WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wuxuu sheegay in baaritaanka lagu sameeyo qof kasta oo calaamadaha corona looga shakiyo in ay "saldhig u tahay joojinta faafidda" xanuunkan.
"Farriin fudad ayaan dal kasta u sidnaa - baar, baar, baar," ayuu ka yiri shir jaraa'id oo uu dhowaan qabtay. "Dalalka oo dhan waa in ay baaraan kiisaska laga shakiya oo dhan - xanuunkan lama dagaallami kartid adigoo indha xiran."
2. Go'doomi kuwa xanuunsan
Image caption Go'doominta kuwa uu cudurka ku dhacay waa u muhiim dadaalka lagu xakameynayo in uu xanuunka sii faafo
"Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha waxay sameeyeen shaqo wax ku ool ah oo lagu dabagalay, lagu baaray, laguna xakameeyay fayraska corona," ayay tiri Prof Krys Johnson.
Baaritaanka ma ahan mid keliya go'doominaya dadka xanuunsan iyo ka hortagaya inuu fayraska faafo, balse wuxuu gacan ka geysanayaa in la ogaado marka ugu horeysa ee qofka uu qaado, ayey hadalka ku sii dartay.
Sida uu sheegay Johnson, maamulka Shiinaha wuxuu ahaa "mid si weyn u feejigan" marka laga hadlayo kiisaska cusub iyo ogaanshahooda. Waxaa suuragal ah in taas ay sabab u tahay in tirada dadka qaada ay aad hoos ugu dhacdo.
Taiwan, Singapore iyo Hong Kong talaabo taa ka duwan ayey qaadeen: Waa go'doominta qofkii looga shakiyo inuu xanuunka qabo iyo in $3,000 oo dollar oo ganaax ah laga qaado qofkii shuruucda jebiya.
Balse sida uu qabo Nyenswah, muhiimadda istiraatiijiyadda waa ogaanshaha iyo dabagalka kiisaska cusub.
3. Isdiyaarinta iyo tallaabooyiinka degdegga ah
Image caption Taiwan illaa iyo hadda guul ayey ka gareysaa xakameynta Covid-19
Nyenswah, oo horey uga shaqeeyay ka hortagga inuu faafo xanuunkii Ebola ee Galbeedka Afrika, wuxuu sheegay in waxyaabaha aasaaska ah ee looga hortago fayras waa joojinta ka hor intuusan bulshada dhexgalin.
"Dalalka sida Taiwan iyo Singapore waxay muujiyeen tallaabadaas degdegga ah iyo go'doominta kiisaska taas oo muhiim u ah joojinta faafidda," ayuu yiri.
Warbixin dhowaan lagu daabacay Joornaalka arrimaha dawada ee Mareykanka, waxaa lagu sheegay in guusha Taiwan ay qeyb ahaan ka dhalatay in jasiiraddaas ay isa sii diyaarisay ayna xarun xakameynsa cudurada faafa sameysatay sannadkii 2003-dii.
Hay'addaas - oo shaqadeeda ay ka mid tahay cilmi-baaris ayna ka tirsan yihiin hay'adaha dowladda - waxaa la aasaasay markii uu jiray dhibaatadii cudurkii SARS.
"In aad diyaar u noqoto ka falcelinta, aadna talaabo degdeg ah qaado waa laba arrimood oo muhiim u ah marxaladaha koobaad ee fayraska faafa. Yurub iyo Mareykanka waxaan ku aragnay ma ahan oo keli ah in aysan diyaar ahayn, balse falcelin aad u gaaban ayaa jirto," ayuu yiri Nyenswah.
"Sidoo kale waqtigana waa arrin u baahan ka fiirsasho," ayuu hadalka ku sii daray.
4. Kala fogaanshaha bulshada
Image caption Xildhibaannada baarlamaanka Australia ayaa ku dhaqmaya xeerka ah in la kala fogaado
Sida la cadeeyay cudurkan waxaa lagu kala qaadaa istaabasho iyo isu soo dhowaanshaha qof qaba iyo qof kale oo aan qabin cudurka.
"Marka cudurka dalkaaga laga soo sheego, tallaabooyiinka xakameynta ma sii jiri karaan mana noqonayaan wax ku ool," ayuu yiri Nyenswah.
Waxaa xilligaas oo kale loo baahan yahay in dadka ay kala fogaadaan - sida ka muuqatay Taiwan iyo Hong Kong oo arrintaas si adag u fuliyay.
Hong Kong waxay dadka u sheegtay in guryaha ay ka soo shaqeeyaan, iskuullada ayaa la xiray, waxaana la joojiyay dhammaan isu imaatinnada bulshada, dhammaadkii bishii January.
Singapore waxay go'aansatay in iskuullada ay sii furnaadaan iyo in maalin kasta la baaro ardeyda iyo macallimiinta, sida uu qoray wargeyska The Straits Times.
5. Ilaalinta faya-dhowrka
Image caption Dalalka sida Singapore, dawada disha bakteeriyada ayaa si joogto ah magaalada loogu arkaa
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO waxay sheegtay in farxalashada iyo nadaafadda oo la ilaaliyo ay aasaas iyo gundhig u tahay ka hortagga fayraska.
"Dalal badan oo Aasiya ku yaalla waxay arrintaas ka barteen dhibaatadii xanuunkii SARS ee 2003-dii. Dalalkaas waxay ogaadeen in nadaafadda ay ka hor tagto in dadka ay xanuunsadaan ama qaadaan fayras," ayuu sheegay Nyenswah.
Dalalka sida Singapore, Hong Kong, iyo Taiwan waxaa laga helaa xarumo jidadka ah oo la dhigay dawada disha bakteeriyada, iyo isticmaal joogto ah ee waxyaabaha sanka iyo afkalagu xirto.